Wasiir Guri Barwaaqo Oo Warbaahinta Uga Digay Wararka Liddiga Ku ah Qarannimada | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Wasiir Guri Barwaaqo Oo Warbaahinta Uga Digay Wararka Liddiga Ku ah Qarannimada
Published on October 4, 2018 by sdwo · No Comments
Hargeysa (SDWO): Xukuumadda Somaliland ayaa uga digtay warbaahinta in aanay baahinin warar been abuur ah ama wax u dhimaya qarranimada Somaliland.
Sidaasna waxa lagu sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Somaliland Md. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax (Guri-Barwaaqo), waxaana warxaafadeedkaasi u dhignaa sidan:-
“Warbaahinta kala duwan ee dalka ka hawlgasha, waxa ay qaarkood caadaysteen inay faafiyaan warar lid ku ah wada-jirka shacbiga iyo jiritaanka Qaranimada Somaliland, sidoo kalena halis ku ah amniga dalka.
Sida uu dhigayo xeerka saxaafadda Somaliland, Xeer No.27/2004, waxa warbaahinta xaaraan ka ah inay baahiyaan warar ku lug leh arrimaha ciidammada iyo sidoo kale kuwo been abuur ah ama se mala-awaal ah, waxa loo raacayaa arrimahan sida uu tilmaamayo qodobka 10aad ee xeerka saxaafadda Somaliland xubintiisa koowaad, labaad iyo qodobka 15aad”ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka.
“Sidaas darteed, laga bilaabo maanta waxa la farayaa in warbaahintu ka digtoonaadaan wararka been abuurka ah, ku tidhi ku-teenka ah, aflagaadooyinka shaqsiga ah iyo kuwo khaas u ah qofka iyo arrimaha ciidammada.
Cid kasta oo ku kacda baahinta war ku liddiya qodobada xeerka saxaafadda Somaliland ku xusan, waxa laga qaadi doonaa talaabo waafaqsan sharciga.”